EverMerge dia lalao freemium iray be, saingy mampiankin-doha | Androidsis
Fangaro majika ao amin'ny freemium vaovao antsoina hoe EverMerge
Alohan'ny hanombohana milaza fa miatrika freemium isika amin'ny lafiny rehetra, ka raha tsy afaka miaraka amin'ireo lalao ireo ianao dia aleo miala. Toy izany koa EverMerge, lalao vaovao tsy maintsy atambatra singa maro be hanohanana ny majia sy ny fandrosoana araka izay tratra.
A nulohateny evo ho an'ny Android tena hita maso ary tsy misy tsy fahampiana ireo lahatsoratra amin'ny teny Espaniôla na ireo endri-tsoratra mahafinaritra izay tena mifanitsy amin'ireo izay hitantsika amin'ny lalao toa ny Hay Day avy amin'i Supercell. Ho hitanao ireo tarehin-angano toy ny Pinocchio, Cinderella na Peter Pan miaraka amin'ny tontolon'ny andriambavy sy mpanjaka izay tsy mitsahatra mitambatra izy ireo raha tsy mijanona.
1 Freemium feno fonosana
2 Mamorona fanangonana hanomezana toetra ny toetra EverMerge
3 Mamokatra unicorn mahagaga
Freemium feno fonosana
Miatrika a lalao izay mampiseho izay rehetra hitantsika amin'ny olona an-jatony hafa ao amin'ny Play Store. Raha nanapa-kevitra ny hitondra azy any amin'ireto andalana ireto izahay dia satria milalao tsara ireo karatra ireo izy ary mahay manantona hatramin'ny segondra voalohany. Na dia tsy tianao aza ireo lalao ireo, raha mahavita mamorona fanampiny izy dia manana zavatra tsara izy.
Raha ao MergeCraft amin'ny fomba Minecraft tsy maintsy manambatra fomba fahandro avy amin'ny lalao noforonin'i Notch, eto isika dia mitovy amin'ny mahita ilay fanjakana izay hananantsika zavatra marobe hifangaro. Manana dwarf vitsivitsy ihany koa izahay izay hanampy anay amin'ny lahasa sasany toy ny fanapahana hazo na fananganana tranobe.
Mazava ho azy, ny tutorial dia hitondra antsika amin'ny lafiny rehetra ary izany tantaran'ny andriambavy sy fanjakana izany. Ary ny marina dia tsy mavesatra eto koa izy ireo. Azonao atao ny miteny hoe hain'izy ireo ny manao lalao freemium mahafinaritra.
Mamorona fanangonana hanomezana toetra ny toetra EverMerge
Lafiny iray hafa manan-danja amin'ny EverMerge ihany koa ny fanangonana izay ahafahantsika manambatra ireo tarehintsoratra fantatry ny rehetra toa an'i Cinderella na Peter Pan, ary omeo azy ireo aza ny toetrany manokana. Izany hoe tena eo amin'izao tontolo izao izy ireo miaraka amin'ny lesoka. Ny Sleeping Beauty dia mifamatotra amin'ny kafeinina ary i Puss in Boots kosa tsy mahazaka antsoina hoe saka.
Raha ny momba ny fitambarana, ankoatry ny fototra telo, azontsika atao ny manambatra hatramin'ny 5. Anisan'ireo zavatra azontsika atambatra isika dia manana vatomamy latsaka avy amin'ny hazo, tanimbary feno loharano na harena ankibon'ny tany izay tototry ny harena.
Marina fa ao amin'ny karazana zavatra maro karazana izay misy soatoavina iray hafa an'ny EverMerge. Manana kabine hazo izahay, trano mimanda, vato lapa, na karaoty na katsaka. Ary manohy miaraka amin'ny hazo isan-karazany sy endrika, labozia ary ireo ody famosaviana izay mamoha ny tany na tratra harena isika handroso.
Mamokatra unicorn mahagaga
Ny rehetra dia majika ary tena freemium ao amin'ny EverMerge. Efa naneho hevitra isika fa madio amin'io lafiny io ary ny angovo dia laniana toy ny fotoana hikapana hazo sy fihetsika hafa izay hataon'ireo dwarfantsika. Ho an'ny ambiny, lalao iray azo omena lanja izy ity, na dia toy ny amin'ny hafa aza, arakaraka ny filalaovantsika no handehanan'ny zavatra miadana kokoa raha ny fandrosoana no resahina.
Raha ny fahitana azy dia misy a asa tsara miaraka amin'io fomba fijery isometrika io ary ireo zavatra an-jatony hitambatra. Ireo rehetra efa zatra ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniôla sy ireo endri-tsoratra malaza izay mametraka ny ditin-kazo amin'ny mofomamy. Izahay hitazona ny maro amin'izy ireo eo amin'ny sari-tany mba hampitambatra ary ireo vaovao dia novokarina nisy vokany hita maso.
Freemium antsoina hoe EverMerge izay tonga amin'izany fotoana iray ka fironana ny freemium ary efa nahazatra ny maro. Raha tianao ny lalao mifanandrify, aza adino ny daty ary tadiavo ity iray feno andriambavy, mahery fo isan-karazany ary zavatra majika toy ny unicorn.
Raha tsy jerentsika ny maha freemium azy io, azonao atao ny mametaka ny zavatra ataonao amin'ny fangaro maro.
Manana ny azy ny maso
Betsaka ny zavatra
Tena freemium miaraka amin'ny angovo voafetra
EverMerge: Amboary ny lalao 3
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Fangaro majika ao amin'ny freemium vaovao antsoina hoe EverMerge
mailyn dia hoy izy:
Salama, manam-potoana aho, milalao ary tiako ilay izy, mamono ahy izany, rehefa milalao any ambanin'ny unicorn ianao, tsy tonga akory ny antsasako, mainka fa tsy vitako izany, tsy ataoko intsony, mandeha fotsiny aho amin'ny lalao lehibe, azafady aho tiako loatra, rehefa ataon'izy ireo, ny fihenam-bidy amin'ny fotoana, mijanona ao aho mandra-pahatongan'ny heriko eto, izay sarotra ny mahita, saingy mazava ho azy fa raha tena mora dia mora ihany koa mankaleo ... tiako ho fantatra hoe inona ny diamondra, tsy azoko atao ny manatevin-daharana azy ireo ary manao azy ohatra, gnome mena izay mampitombo ny hafainganan'ireo zavatra, feno diamondra ny boaty ary tsy hitako izay hatao ataovy amin'izy ireo, tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa amidy izy ireo hividy zavatra manerantany nefa tsy misy, inona no hofafako?
Mamaly an'i Mailyn
Tecno Spark 5 Air: fitaovana vaovao 7-inch sy Android 10 Go Edition